न्यूट्रॉन ताराहरू: विशेषताहरू, गठन र जिज्ञासा | नेटवर्क मौसम विज्ञान
ब्रह्माण्डमा हामी बहुविध वस्तुहरूमा फेला पार्दछौं कि उनीहरूका विशेषताहरू र उनीहरूको उत्पत्ति दुबैलाई बुझ्न हामीलाई अझै गाह्रो छ। ती मध्ये एक हो न्यूट्रॉन तारा। यो एक आकाशीय वस्तु हो जुन एक सय करोड टन तौल हो। योसँग न्यूट्रनको व्यावहारिक रूपमा बुझ्न नसकिने घनत्व र एक अनौंठो रंग छ। यस घनत्व भएकोले यसले चारैतिर ठूलो गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्रयोग गर्दछ। यी ताराहरू पूर्ण असाधारण र अध्ययन योग्य छन्।
तसर्थ, हामी यो लेख समर्पित गइरहेका छौं तपाईंलाई सबै सुविधाहरू, संचालन र न्युट्रॉन ताराहरूको उत्पत्ति बताउन।
1 न्यूट्रन ताराहरू के हुन्?
2 न्यूट्रॉन तारहरूको कोर
3 वरपर के छ
न्यूट्रन ताराहरू के हुन्?
कुनै पनि तारा जो पर्याप्त विशाल छ न्युट्रन तारा बन्न सक्षम छ। यो बनाउँछ न्यूट्रॉन तारामा रूपान्तरणको प्रक्रिया असाधारण छैन। तिनीहरू सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा घनेस्ट ज्ञात वस्तुहरू हुन्। जब विशाल ताराले आफ्ना सबै आणविक ईन्धनलाई समाप्त गर्दछ, यसको कोर केही अस्थिर हुन थाल्छ। यो तब हो जहाँ यत्रो मासको गुरुत्वाकर्षण बलले यसको वरिपरिका सबै परमाणुहरूलाई नष्ट गर्दछ।
त्यहाँ आणविक फ्यूजन उत्पादन गर्न ईन्धन नभएकोले, गुरुत्वाकर्षणको लागि कुनै काउन्टर फोर्स छैन। यसरी न्यूक्लियस यति अधिक घनको हुन्छ कि इलेक्ट्रोन र प्रोटोनहरू न्युट्रनहरूमा फ्यूज हुन्छन्। तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ कि, यी मामिलाहरूमा, गुरुत्वाकर्षणले विज्ञापन इन्फिनिटम कार्य गर्न जारी राख्न सक्छ। यदि त्यहाँ कुनै प्रकारको शक्ति छ कि यसलाई पछाडि समात्छ, वस्तु बढी र अधिक घन हुन्छ र गुरुत्वाकर्षण असीम हुनेछ। यद्यपि, डिजेनेसी प्रेशर कणहरूको क्वान्टम प्रकृतिका कारणले हो र यस घन न्युट्रॉन तारा आफैंमा नझलिन बन्न अनुमति दिन्छ।
बिग्रनुको सट्टा, न्यूट्रन ताराहरू धेरै तातो हुन्छन् ताकि प्रोटोन र इलेक्ट्रोनहरू एकसाथ गाँसिन र न्यूट्रनहरू बनाउन सक्छन्। तारा को कोर भएको ए द्वारा १० डिग्रीको तापमान el डिग्री क्याल्भिनमा बढेको छ र यसले कम्पोज गरेको सामग्रीको फोटोडेस्टेसन उत्पादन गर्दछ। तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि यी सबै आणविक अराजकताहरू जुन न्युट्रन ताराहरूको गठनमा देखा पर्दछन् परम्परागत ताराको भन्दा जटिल र हिंसात्मक छ। र यो यो छ कि यससँग धेरै ऊर्जा छ जुन चक्रात्मक तरिकामा उत्पन्न हुन्छ यो अधिकतम घनत्वमा पुग्न सम्म।
न्यूट्रॉन तारहरूको कोर
यदि एक न्यूट्रॉन तारा को कोर मा धेरै ठूलो मात्रा थियो, यो सम्भव छ कि यो पतन र कालो प्वाल बनाउन सक्छ। वास्तवमा, धेरै वैज्ञानिकहरूको विचारमा कालो प्वालको उत्पत्ति यहाँबाट आएको हो। जब संकुचन रोक्न पर्याप्त दबावमा पुगिन्छ, ताराले यसको माथिल्लो तहहरू गुमाउँछ र हिंसात्मक सुपरनोवामा जान्छ। प्रक्रिया जारी छ तर स्टार बिस्तारै चिसो हुँदैछ। यो Photodecay को कारणले हो। जब अन्तिम चरणहरू पुग्छन्, तारामा अवस्थित लगभग सबै कुरा पहिले नै न्यूट्रनमा रूपान्तरण भइसकेका छन्।
यदि तारा को कोर मा धेरै ठूलो मास छ भने, कालो प्वाल बनाउन सक्छ। ताराहरूको सन्दर्भमा, यो प्रक्रिया चाँडै रोकिन्छ किनभने पतित दबावले कणहरूलाई धेरै नजिक राख्छ तर तिनीहरूको प्रकृति गुमाए बिना। यस तरिकाले, न्युट्रॉन ताराहरू ती हुन् जसले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा अवस्थित घन पदार्थको सीमा चिह्न गर्दछन्।
तिनीहरू केवल घन वस्तुहरू मात्र हुन्, तर तिनीहरू पनि ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा उज्यालो तत्वहरू मध्ये एक हुन्। यो भनिन्छ कि यसमा पल्सरको जस्तो विशेष चमक छ। जब न्युट्रन ताराहरू धेरै उच्च वेगमा घुम्दछन्, तिनीहरूले उच्च-ऊर्जा किरणहरू उत्सर्जन गर्छन्। अवलोकनमा, यी किरणहरूको व्याख्या गरीन्छ यदि यो पोर्टमा एक लाइटहाउस थियो। यी सबै उर्जा उत्सर्जनहरू बीच-बीचमा र पल्सारसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छन्। यी ताराहरू प्रति सयौं धेरै सय पटक घुमाउन सक्छन्। तिनीहरू यस्तो गतिमा गर्छन् कि समान स्टारको भूमध्यरेखी विकृत हुन्छ र स्पिनको क्रममा तानिन्छ। यदि यो विशाल गुरुत्वाकर्षणको लागि होईन, स्पिनबाट उत्पन्न केन्द्रापसारक शक्तिको कारण ताराहरू चकनाचूर हुनेछन्।
वरपर के छ
हामीलाई थाहा छ कि न्युट्रन ताराहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन्। अब हामी उनीहरूको वरिपरि के हो थाहा हुनु पर्छ। तिनीहरूको वरिपरि विसंगतिले गर्दाको गुरुत्वाकर्षण यति ठूलो छ कि समय फरक गतिमा बित्दछ। समयको गति यसको क्षेत्रभित्रका मानिसहरूलाई फरक देखिन्छ। बारेमा हाम्रो वरिपरि अन्तरिक्ष को समय को प्रकृति को एक अभिव्यक्ति.
यस गुरुत्वाकर्षणको मात्राको कारण, यसका वरिपरिको आकाशीय चीजहरू धेरै आकर्षित हुन्छन् र ताराको अंश बन्छन्।
आउनुहोस् केहि उत्सुकताहरू हेरौं जुन विशाल ताराहरूको यस प्रकारको बारेमा अवस्थित छ:
न्यूट्रॉन तारा द्वारा गठन गरिएको छ एक विशाल तारा को ईन्धन कमी.
एक न्युट्रॉन तारा खण्डमा चिनी घनको आकारमा एक पटकमा सम्पूर्ण मानव जनसंख्या जत्तिकै ठूलो मात्रा हुन्छ।
यदि हाम्रो सूर्य न्युट्रन ताराहरूको बराबर घनत्वमा कुचल्न सक्छ भने, यो सगरमाथा जत्तिकै मात्रामा ओगट्छ।
यस ठाउँको गुरुत्वाकर्षण को ठूलो मात्रा को कारण अस्थायी फैलाव को कारण छ कि सतह बनाउँछ न्यूट्रॉन तारा पृथ्वी भन्दा %०% ढिलो पार गर्दछ.
यदि कुनै मानिस यी प्रकारका ताराहरूको सतहमा खस्छ भने, यसले २०० मेगाटन फुटको उर्जा उत्पादन गर्दछ।
न्युट्रॉन तारा जसले उच्च गतिमा स्पिन गर्दछ रेडिएसनको पाठ्यक्रम उत्सर्जन गर्दछ र त्यसैले पल्सार भनिन्छ।
यदि हाम्रो सूर्य पूरै ईन्धनको लागि वा आणविक फ्यूजनको विस्फोटक शक्तिमा, गुरुत्वाकर्षणको आकर्षण यस्तो हुन्छ कि यो कुरा आफ्नै गुरुत्वाकर्षणको अन्तर्गत समाप्त हुन्छ।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईं न्युट्रन ताराहरू, उनीहरूका विशेषताहरू र उनीहरू कसरी काम गर्छन् भनेर अधिक जान्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » न्यूट्रॉन ताराहरू